गएका जब दिन हो मान्छे भेला मा एक पीठ मा पार्क वा एक पैदल लागि गए यो वर्ष पछि खोलिदिनुहुन्छ । अब डेटिङ लागि देख छैन पनि एक डिस्को वा स्कूल नृत्य । झन् लोकप्रिय इन्टरनेट प्रविधि संग, इलेक्ट्रनिक प्रकार को डेटिङ
केहि गर्न सक्छन् भनेर खतरामा तपाईं जब तपाईं घर मा एक ओछ्यान नजिकै ल्याप्टप? यस लेखमा सबै प्रश्नहरूको जवाफ.
बस राखे, च्याट गर्न सक्ने क्षमता छ विनिमय पाठ संदेश वास्तविक समय मा
देखि इमेल यो विभिन्न छ किनभने तपाईं तुरुन्तै देख्न सक्छौं वाक्यांश तपाईं यस्तो लेखे आफ्नो साथी । पाठ च्याट सक्छ मतलब संचार, पनि बीच प्रयोगकर्ता को एक ठूलो संख्या छ । सामान्यतया आदानप्रदान गर्न प्रयोग छोटो, छिटो वाक्यांश.
यस्तो च्याट मा एम्बेडेड सकिन्छ एक वेबसाइट मा एक विशिष्ट विषय (
माछा मार्ने) र प्रयोग गरिन्छ अनुभव आदान प्रदान गर्न र समाचार छ । तर, यो च्याट कोठा बन्द छन्.पहुँच गर्न मा यो च्याट, तपाईं प्राप्त गर्न आवश्यक विशेष अधिकार वा निमन्त्रणा देखि प्रयोगकर्ता । यी सबै प्रतिबन्धको सेट द्वारा साइट सृष्टिकर्ता वा प्रशासक (पंच).
देखि फोरम च्याट मा भरेको छ कि, एक रूपमा शासन, गर्दैन छ एक विशिष्ट विषय छ, र अक्सर प्रयोग को लागि सरल»चटर्जी»
← मान्छे को बैठक